Xildhibaanada Digil & Mirifle oo badi ka hor yimid Isbaheysiga 2da Shariif. – idalenews.com
Isku day labadii beri ee ugu dambeeyey Xildhibaan Shariif Xasan Sheekh Aadan kalsoonida codadka Xildhibaanada Digil iyo Mirifle ugu raadinaayey Saaxiibkiis Shariif Sheekh Axmed ayaa ku dhamaadey fashil ka dib markii inta badan xildhibaanada DM ka hor yimaadeen balanqaadyadii lacageed ee loo sheegey. waxayna ku adkeysteen in ay aragtidooda u madax banaanaadaan isla markaasna doortaan cid ay doonaayaan.
Shariif Xasan Sheikh Aadan oo ay wehliyaan ganacsato ay isku heyb yihiin Shariif Sheikh Axmed ayaa balanqaadyo lacageed u fidiyey beelaha Digil iyo Mirifle balse waxay ku adkeysteen in ka badan 53 xildhibaan oo beelahaas ka tirsan ineysan raali ka noqon doonin in shariif xasan ku gorgortamo codadkooda isagoo u cararaaya maslaxadiisa gaarka ah, haba yaraatee aan danta qaranka iyo tan deegaanada uu ka soo jeedo. Iyagoo si cad uga sheegey xubnihii kulanka la qaatey iney codadkooda in ay u madaxbanaan yihiin cidii ay doonaan si xor ah u dooran karaan.
Ishabeysiga 2da Shariif iyo dhaqaalaha lagu raadinaayo in codadka xildhibaanada Soomaaliyeed DM iyo beesha Dirta la helo ayaa 2dii cisho ee la soo dhaafey magaalada laga dareemaayey.
Prof Maxamed Sheekh Cisimaan Jawaari ayaa sheegey in isbaheysi siyaasadeed xiliga doorashada iyo balanqaadyo hoose oo la galaa aysan wax macno keeni doonin loona baahneyn, waxuuna xildhibaanada Soomaaliyeed kula dardaarmey in codkooda yahay amaano, doortaana madaxweyne leh aqoon, karti iyo daacadnimo horseeda in dalkaani ka baxo fowdaha iyo musumaasuqa hareeyey wax ka badan 20 sano.
Xaflad 2da Shariif si wadajir ah u qabteen oo ka dhacdey Hotel Plaza City ee Magaalada Muqdisho